परिस्थितिलाई स्विकार्दै वर्तमान समयमा जीवन जिउनुपर्छ - Harekpal
परिस्थितिलाई स्विकार्दै वर्तमान समयमा जीवन जिउनुपर्छ
अमित संग्रौला ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ११:३० मा प्रकाशित
एकदिन गुरु र शिष्य गफ गर्दै बाटोमा जाँदै थिए । त्यसैबखत बाटोमा सानो नदि हुन्छ । शिष्य पहिला नै त्यो नदि तरेर अर्को किनारमा पहिला पुग्छ ।गुरुले त्यो नदि तर्ने बेलामा अधबैंसे महिला त्यहाँ नजिकै हुन्छिन् ।महिला अशक्त र कम्जोर भएकोले गुरुले बोकेर त्यो नदि तर्न सहयोग गर्छन् ।त्यो नदि तरेको शिष्यले देखिरहेको हुन्छ । शिष्यको नियत खराब हुन्छ । शिष्यले भन्छ गुरुजी तपाईंको यस्तो हुनुहुँदो रहेछ महिले कहिले सोचेको थिइन ।गुरुजी भन्नुहुन्छ के कुरा बालक ? त्यो महिलालाई तपाईंले कसरी बोक्नुभयो । त्यो कुरा सुनेर गुरुजी हाँस्नुभयो । बालक ती महिलालाई त्यहीँ नेर भएको किनारमा छोडेको दुई तीन घन्टा भइसक्यो ।त्यो कुरा अहिले गर्दै छौ ?
वास्तवमा भन्ने हो हामी के गर्छौ भने विगतमा भएको नराम्रा घटना सम्झिन्छौ । बितेको कुरालाई सम्झेर हामी दुखित हुन्छौं । हाम्रो मन कित भुतमा जान्छ । कि त भविष्य जान्छ । मन कहिल्यै पनि स्थिर हुदैनन् । मन चंचल हुन्छ । कथामा भएको शिष्यले गुरुले गरेको हर्कत देखेर । उसको मन बितेकै कुरालाई मनमा ल्याएर उ दुखित भएको थियो । हामी दैनिक जीवनमा पनि अरुको गल्ती , बर्शौ अघिको दुश्मनी सम्झेर छरछिमेकीमा बोलचाल समेत बन्द गर्छौ । एउटा सानो गल्तीको कारणले सम्बन्ध पनि फाटो आउँछ । हामी दुश्मनी निभाउन जान्दछौ तर माफ दिन सक्दैनौं ।बितेको नराम्रा घटना बिर्सेर सुन्दर भविस्यको लागि वर्तमान समय जिउन जो सक्छ । उसले नै वास्तविक खुसीको अनुभव गर्न सक्छ । भुतकाल लाई बिर्सिने हो। भविस्यको योजना बनाएर । वर्तमान समयमा जीवन जिउनुपर्छ । खुसी भोलिमा हुदैन आजमा छ ।
जीवनमा आएको जस्तोसुकै परिस्थिति होस हामी त्यो समयलाई स्विकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । समय बिग्एि पनि मानिसको मनस्थिति बिग्रन दिनु भएर । वर्तमान जीवनमा जीवन जिउन गाह्रो छ । हाम्रो मन भुत र भविस्यमा जान्छ। सुरुमा त्यो समयलाई स्विकार गर्ने अनि मात्र एक्सन लिने हो । त्यो समयलाई स्विकार गर्न नसकेर मान्छेभित्र क्रोध पैदा भएर विभिन्न अपराधी क्रियाकलाप गर्न पुग्छन् । त्यो भएर समय स्विकार गर्दा मन शान्त हुन्छ । जीवनमा आइ पर्ने कठिन परिस्थितिमा सहज दङ्गले हामी अघि बढ्न सक्छौ । विभिन्न परिस्थिति होस वा त्यस्तो समयमा धर्य गर्न आवश्यक छ ।खुसी जीवनको लागि हाम्रो मन शान्त बनाएर अनुशासन धर्यको साथसाथै समयलाई स्विकार गरेर वर्तमान समयमा जीवन जिउनअभ्यास गर्नुपर्छ ।